Ahoana no ahafahan'ny backlinks ambony kokoa manampy anao hampahafantatra ny votoatin'ny mpanjifa anao?
Ny fananganana tranokala dia fahafahana tonga lafatra ho an'ny votoatin'ny votoaty. Ny fananganana rohy amin'ny fifandraisana am-pahamendrehana dia fanalahidy iray amin'ny fanatsarana ny fahitana ny tranonkala. Ny tranonkala fifandraisana dia ny, dia, ary izy no ho laharam-pahamehana Google Google. Izany no mahatonga ny lahatsoratry ny lahatsoratra hanokanana fomba mahomby hahazoana rindran-kira ambony.
Ny fananganana tranonkala dia mametraka rohy amin'ny loharano hafa izay mitondra any aminao. Amin'ny fananganana rohy, afaka manangana rohy ianao ao amin'ny tranokalanao izay manondro ireo domains samihafa. Amin'ny fananganana antontan-taratasy maro an'io karazana io, dia ho afaka hanangana tambajotra ianao. Raha ny ankamaroan'ny rohy eksterna izay manondro ny tranonkalanao dia avy amin'ny sehatra ambony manam-pahefana ambony, ny tranonkalanao dia hitsangana amin'ny sandany sy ny laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana.
Misy fomba maro samihafa ahazoana rohy mankany anaty. Maro amin'ireo fomba ireo no voakilasy ary afaka manakana ny tranokalanao. Izany no mahatonga anao hifantoka amin'ny sainao amin'ny teknolojia fotsy SEO hanamboatra rohy fanorenana.
Ahoana no handaharana ny votoaty ao amin'ny Google?
Ny fotoana tena manan-danja tokony hitranga dia manangana ny maso sy ny mombamomba ny mombamomba anao. Tsy dia mafy loatra araka ny fiheveranao azy. Mila mamorona lahatsoratra lava izay mandrakitra ireo lohahevitra mifandraika amin'ny mpihaino anao. Ohatra, ny kalitao mifototra amin'ny fikarohana, ireo lahatsoratra ao amin'ny votoatiny izay mamaly ny fanontaniana mety ho azonao amin'ny mpanjifa.
Ankoatr'izay, mila mamorona rindran-damina avo lenta mahazatra ho an'ity votoaty ity ianao. Tena ilaina ny rohy azo avy amin'ny fitrandrahana amin'ny famokarana traikefa. Sarotra ny mametraka votoaty tsy misy rohy manondro azy.
Ahoana no hahazoana bakalava avo lenta?
Mila averina arahina tsara ny backlinks raha toa ka misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokalanao ny fanavaozana.
Ny tsy fahampian'ny tranonkala mifandraika amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny fifandraisana dia manilika ny litera ankapobeny. Tokony hanandrana mampiasa teny fanalahidy samihafa ho an'ny vatofantsika ianao mba hampisehoana ny karoka fitadiavana ny fahasamihafana marikao. Ankoatra izany, mila misoroka mazava tsara ianao na vatofantsika.
Ny karazana backlinks hafa tokony hokarakaraina manokana dia ny rohy ao anaty. Izy ireo dia avy amin'ny bilaogy niangiana sy ny hafatra voarainy. Zava-dehibe ny fampiasana fifangaroan'ny karazana fikarohana ara-boajanahary, taranjan-doha ary ambany izay misy ireo variana lava lava rehefa mamorona rohy anaty.
Ny fampitomboana ny votoatin'ny votoaty dia mety ho dingana ara-potoana. Na izany aza, rehefa avy nanangana fototra lehibe ianao dia afaka manomboka mamorona lamandy, lamàtra mavesatra miaraka amin'ireo vatofantsika marina. Araka ny nambarako teo aloha dia mila miala amin'ny lahatsoratra am-piraiketam-pejy ianao satria mety hahasarika azy ho toy ny spam ny fikarohana.
Betsaka ny dingana tokony harahinao hananganana tamba-jotra avo lenta. Ireto fepetra ireto dia ahafahana mandefa backlinks; Manangana fifandraisana tsara amin'ny bilaogera sy webmasters mifandraika amin'ny niche; fanamarinana ny hafatra amin'ny rohy ivelany; Mamorona ny blôginao ary ataovy malaza; Zarao ny fifandraisana amin'ny sehatra media sosialy malaza Source .